Akụkọ - Ngwa nke Igwe na ebe iru mmiri na-adịgide na ngalaba Ahụike na Ahụike
Ojiji nke Okpomoku na Okpomoku inlọ na Ahụike na Ahụike
Ka ọ dị ugbu a, a ka achịkwabeghị ọrịa ọrịa ahụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa kpamkpam, mba na mpaghara dị iche iche na ngalaba ahụike na ngalaba ahụike na ngalaba nyocha na-agbaso usoro nzaghachi na-arụsi ọrụ ike. a na-ejikarị incubator na-ekpo ọkụ na-eme ihe mgbe niile na ọdịbendị nje na-emechi na ọdịbendị cell mechiri emechi na ụlọ nyocha, ma ọ dị oke mkpa maka nyocha nje na mmepe ọgwụ mgbochi, ọkachasị metụtara The pre-warming of equipment and reagents can ውጤታማ rụọ ọrụ nke ọma nke nchọpụta na ule. Patented sọrọ ụlọ okpomọkụ akara usoro, nke ukwuu mma ịdị n'otu nke okpomọkụ na igbe, irè okpomọkụ akara nso bụ + 5 ℃ -65 ℃; PID akara mode, obere fluctuations na okpomọkụ akara ziri ezi, na-aghọta kpọmkwem okpomọkụ akara; ịmụta JAKEL ọkpọkọ eruba mgbasa ofufe, pụrụ iche imewe nke ikuku duct, ike ezi ikuku mgbasa na convection, ma hụ na ịdị n'otu okpomọkụ.
Temperaturenọgide na-enwe okpomọkụ na iru mmiri ule ụlọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi simulate mgbagwoju gburugburu ebe obibi dị ka ala okpomọkụ, elu okpomọkụ, elu okpomọkụ na elu iru mmiri, ala okpomọkụ na ala iru mmiri. A na-ejikarị ụlọ nyocha ahụ eme ihe maka ọdịbendị ihe ọkụkụ, ule ozuzu; bacteria, microbial omenala, gbaa ụka, dị iche iche mgbe nile okpomọkụ ule, gburugburu ebe obibi ule, mmiri analysis, BOD, Mkpebi, denaturation ule nke microbial omenala ihe na nchekwa nke omenala ajụ, ọbara, ọgwụ ọjọọ, wdg Ọ na-ọtụtụ-eji ọgwụ na ahụ ike na, ndu. , ogwu ogwu, oru ugbo, nchedo gburugburu na nyocha ndi ozo na ngwa.
Ọ na-nwere a elu àgwà anya, na-enwu gbaa, obosara ubi nke ọhụụ nnukwu chọpụtara window, humidification usoro pipeline na akara circuit nkewa, elu na a pụrụ ịdabere na friji na akara usoro. Ọ bụghị naanị nke ahụ, igbe ya na-arụ ọrụ site na ọnụọgụ njikwa igwe, mana ọ na-ejikwa akwa mkpuchi mkpuchi dị oke mma iji nweta mmetụta nke ịdị iche nke okpomọkụ, na-ebelata oke mgbanwe mgbanwe okpomọkụ na igbe ahụ, na ịka akara nke mgbochi silicone na-egbochi ịka nká. akara roba.
A na-ejikarị igbe okpomọkụ na igbe iru mmiri na-eme ihe maka ịkọ ihe ọkụkụ, ozuzu nnwale, ịkọ ihe dị iche iche microorganisms, ule dị iche iche na-agbanwe mgbe niile, ule gburugburu ebe obibi na ụlọ nyocha ndị ọzọ. A na-ejikwa ya na nlekọta ahụ ike, biopharmaceutical, nchebe gburugburu ebe obibi na mpaghara ndị ọzọ. Akụrụngwa ejiri nwalee arụmọrụ nke ihe na gburugburu dị iche iche, nwalee oyi, okpomọkụ, akọrọ na mgbochi mmiri nke ihe.